Puntland oo duq cusub u magacowday magaalada Laascaanood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo duq cusub u magacowday magaalada Laascaanood
Puntland oo duq cusub u magacowday magaalada Laascaanood
April 9, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalada Laascaano. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa duq cusub u magacowday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, sida lagu sheegay digreeto maanta oo Isniin ah kasoo baxday xafiika madaxweyne ku xigeenka.
Cabdiqani Makhtal Mohamed Garaad ayaa loo magacaabay duqa cusub ee Laascaanood, sida lagu sheegay digreetada kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka Cabdixakiin Cumar Camay.
Laascaanood ayaa ku jirtay gacanta maamulka Somaliland tan iyo sanadkii 2007.
Magacaabida ayaa kusoo beegmaysa iyadaoo ciidamada Puntland iyo Somaliland ay isku horfadhiyaan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan.
July 3, 2018 Ciidamada Badda Puntland oo muhaajiriin ku qabtay meel u dhow xeebta Boosaaso
Waqooyiga Kuuriya oo Mareykanka ku eedaysay iclaamin dagaal
New York-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa ku eedaysay Mareykanka in uu wado dagaal ka dhan ah iyaga. Wasiirka Arrimaha Dibada Waqooyika Kuuriya Ri Yong-ho ayaa shalay oo Isniin ahayd warbaahinta u sheegay in adduunka oo [...]